सोनिका रोकायाको जन्मदिनमा पारस शाहले के उपहार दिए? हेर्नुहोश - Sajha Mobile
सोनिका रोकायाको जन्मदिनमा पारस शाहले के उपहार दिए? हेर्नुहोश
Posts2· Viewed 17371 · Go to Last Post
चर्चित युट्युब च्यानल वाऊ नेपालको संचालिका, भिजे एवं मोडल सोनिका रोकाया आइतबार २५ वर्ष लागेकि छिन् । फेब्रुअरी १६, १९९५ मा बझाङमा जन्मिएकि सोनिकाले आफ्नो जन्मदिनको विशेष भिडियो युट्युबबाट सार्वजनिक गरेकि छिन् । उक्त भिडियोमा युर्वयुवराज पारश शाह हसिलोमा मु द्रामा देखिएका छन् । सोनिका र पारशले एकआपसमा चु म्ब न गरेको क्लिप भिडियोमा देख्न पनि सकिन्छ । उक्त भिडियोमा पारशले सोनिकालाई हिराको हार गिफ्ट दिएका छन् । पारशले गिफ्ट दिनासाथ सोनिकाले उक्त हार गलामा लगाएकि थिइन् । उक्त भिडियोमा सोनिकाको अन्दाजनै फरक देखिन सकिन्छ । आफैँलाई सम्हा ल्न नसकिएको जस्तो दृश्यहरु भिडियोमा थुप्रै देखिएका छन् ।
· Snapshot 1797
ब्रो तिम्ले विश गर्ने मानिस छ , के दियौ ?
Last edited: 18-Feb-20 07:11 PM
Visitor from US is reading सोनिका रोकायाको जन्मदिनमा पारस शाहले के उपहार दिए? हेर्नुहोश
Visitor from US is reading TGIF
Visitor from US is reading Kite Runner Movie Delayed
Visitor from US is reading Kina British Army Le Newar Lai Lidaina
Visitor is reading Business Idea
· Posts6· Viewed 262
· Posts4· Viewed 344
· Posts 30 · Viewed 11551 · Likes 18
· Posts 10 · Viewed 1146 · Likes 8
· Posts 30 · Viewed 4544 · Likes 19
· Posts9· Viewed 991 · Likes 4
· Posts 20 · Viewed 1425 · Likes 11
· Posts3· Viewed 190